Ndị ọkàiwu na-akwado ụmụaka na Netherlands - Law & More
Onye ọka iwu ịgba alụkwaghịm » Nkwado Nwa
Gị na onye gị na ya bibu enweela ụmụaka? Mgbe ahụ nkwado ụmụaka bụ akụkụ dị mkpa nke nkwekọrịta ego a ga-emerịrị n'oge ịgba alụkwaghịm. Almụaka ụmụaka bụ ego ole nne ma ọ bụ nna na-enyeghị nwa nyere aka na-elekọta ma zụlite ụmụaka.
YOU chọrọ nkwado oku ụmụaka?
> Ọkwa nkwado nwata
> Cunyocha nkwado ụmụaka
> Inggbanwe nkwado ụmụaka
Ọkwa nkwado nwata
Na oge ịchọrọ ndụmọdụ, gị na onye gị na ya na-akpakọrịta nwere ike ikwenye na ego ole nwata ahụ nwere. A ga-edokwa nkwekọrịta ndị a na atụmatụ ịzụ ụmụ. Ọ bụrụ n ’enweghị ike ịbịaru nkwekọrịta ọnụ, otu onye ọka iwu anyị ga-enwe obi ụtọ inyere gị aka. Anyị nwere ike inye aka na mkparịta ụka nke mkparịta ụka, kpebie ego ole ụmụaka ga-eji nyere gị aka ma bulitekwa nne na nna. Anyị na-eme mkpebi siri ike nke nkwado nwa site na ị nweta mgbazi mmezi.
Ọ bụghị naanị na onye ọka ikpe ga-eleba anya na ọnọdụ ego nke onye na - akwado nwatakịrị na - akwụ ụgwọ ụmụaka, mana ọ na - elekwa ọnọdụ ego nke nwa alimoni na - akwụ. Dabere na ọnọdụ abụọ ahụ, ụlọ ikpe ga-ekpebi ego ole nwata akwụgo.
Cunyocha nkwado ụmụaka
Ngụkọta oge mmezi bụ ihe siri ike nghọta ebe ọ bụ na enwere ọtụtụ ihe aga-elebara anya. Law & More ga-enwe obi uto ime ihe gbakoro mmezi gi.
Nke mbụ, a ga-ekpebi mkpa ụmụaka ahụ. Ọ dabere na ego e nwetara dị ka ha dị tupu ịgba alụkwaghịm. Ọ bụrụ na enwere ụgwọ pụrụ iche, dịka ụlọ akwụkwọ mba ụwa ma ọ bụ nlekọta ụmụaka, enwere ike ịbawanye ụgwọ ka ọ kwekọọ.
Ozugbo achoputara ihe umuaka choro, enwere ikike ibu ikike ibu maka uzo abua. Ngụ a na-ekpebi ma onye a ga-akwụ ụgwọ maka mmezi nwere ikike ego zuru oke iji nwee ike ịkwụ ụgwọ alimoni. Iji chọpụta ikike akụnụba nke onye ga-akwụ ụgwọ ego, akpa ego ya ga-ebu ụzọ kpebie. Pgwọ nwa a na-akwụ bụ ego bụ isi, na-atụle isi mmalite niile nke ego, dị ka ụgwọ ọrụ, uru na mmefu ego nwa ahụ.
Onye nne na nna ga-akwụ ụgwọ alimoni ma onye ya na ụmụntakịrị ga-enwe ego maka ilekọta ụmụaka. Nke a gụnyere ụgwọ maka ịzụ ahịa, ịnya ụgbọ na azụ. Na ụkpụrụ, a na-etinye pasent ụfọdụ nke ụgwọ ahụ na mgbako ahụ
Ole nke pasent ahụ dabere na ụbọchị nleta kwa izu. Onye nne na nna nwere ego otu nwata na-elekọta otu izu n'izu, na-enweta ego nlekọta nlekọta ahụ dịka ọ dị 15% na nne ma ọ bụ nna na-elekọta nwa ahụ ụbọchị atọ n'izu na-enweta ego nlekọta 35%.
Nzọụkwụ ikpeazụ iji gbakọọ ịdị elu nke nkwado nwatakịrị bụ ime ka ngwongwo na-ebu ihe. N'ime oge a, ego ụmụaka ka akwadoro n'etiti gị na onye gị na ya bi na mbụ dịka ego ha si akwado. Egosi ikike nke mmadu kwesiri ime ka aturu tunyere ikike nke mmadu ikwusi ndozi. Mgbe nke ahụ gasị, a ga-etinye ntinye ego ọ bụla ma gbanwee ya ebe ọ dị mkpa. A na-ezubere nkwado dị mkpa maka nkwado ụmụaka. Ọ bụrụ na a ka nwere ofe mgbe nke ahụ gachara, onye ọka ikpe nwekwara ike ikpebi nwamba nke mmekọ.
Ọ ga-amasị gị ịmata etu ọnọdụ ego gị ga-esi gbasie ịgba alụkwaghịm gị? Biko kpọtụrụ Law & More anyị niile anyị nwere ike ikpebi ego ụmụaka ga-akwụ ma ọ bụ nata.
Inggbanwe nkwado ụmụaka
Ọ bụrụ na ọ gaghị ekwe omume ịgbanwe ego nwata ahụ na gị na onye gị na ya bi na mbụ, anyị nwere ike itinye arịrịọ maka mgbanwe maka gị n'ụlọ ikpe. Anyị nwere ike ịme nke a ma ọ bụrụ na agbanwee ọnọdụ ma ọ bụ ọ bụrụ na, dị ka gị si kwuo, ụlọ ikpe kpebiri mmezi ya na usoro mbụ dabere na ozi na-ezighi ezi ma ọ bụ ezughị ezu.
Can nwere ike iche maka ọnọdụ ndị a, dịka ọmụmaatụ:
• achụpu ma ọ bụ enweghị ọrụ
• iwepụ ụmụaka
• ọrụ dị ọhụụ
• ịlụgharị di, lụkọta ma ọ bụ banye na ndenye aha gị
• mgbanwe nke kọntaktị kọntaktị